सपनामा मरेको मानिस देख्ने गर्नुहुन्छ ? कतै यस्तो त भएको छैन ? - IAUA
सपनामा मरेको मानिस देख्ने गर्नुहुन्छ ? कतै यस्तो त भएको छैन ?
ramkrishna October 19, 2017	सपनामा मरेको मानिस देख्ने गर्नुहुन्छ ? कतै यस्तो त भएको छैन ?
मृत्यु ठूलो सत्य हो । हरेक प्राणीले जन्मेपछि मर्नैपर्छ । मृत्युका कारण अनेक हुन सक्छन् तर मृत्यु निश्चित छ ।
मानिस मरिसकेपछि के हुन्छ ? कसैलाई पनि थाहा छैन । तर विभिन्न धर्म ग्रन्थ र वैज्ञानिक अनुसन्धानको अनुसार मानिस मरिसकेपछि पनि उसको आत्मा जिउँदो रहने विश्वास गरिएको छ ।
जीवनमा कहिले काहिँ यस्तो पनि हुन्छ कि आफ्नो नजिकको मानिसको मृत्युपछि पनि उसलाई सपनामा देखिरहने, सम्झनामा आइरहने हुनसक्छ ।
यस्तो अनुभव अनौठो रहस्यमय हुन्छ । मनोविज्ञानका अनुसार सपनाहरूमा विशेष सन्देश लुकेका हुन्छन् ।
Previous Previous post: नाइटो हेरेर थाहा हुन्छ कुन महिलाको स्वभाव कस्तो ?
Next Next post: बच्चाहरुको हाइट बढाउन यस्ता खानेकुराहरु खुवाउनुहोस्